Nezvedu - Xuzhou VYT Machinery Technology CO., Ltd.
Xuzhou VYT Machinery Technology Co, Ltd.
Xuzhou VYT Machinery uye Technology Co., Ltd. yave ichigadzira michina kugadzirwa FIBC kwemakore akawanda, Kwete Just kuti michina, zvakadzama anotora chikamu muindasitiri uye zvakare inopa hunyanzvi hunyanzvi mabasa anosanganisira ehunyanzvi mhinduro, mamodheru sarudzo, technical technical kubvunza uye technical kusimudzira. Nhasi, vatengi vazhinji mune dzinopfuura nyika dze30 kwese kwese wold vanogutsikana nehunhu uye kuvimbika kwezvigadzirwa zvedu nemasevhisi. Pakati pavo nyika inotungamira inogadzira FIBC (hombodo hombe, bhegi remidziyo, jumbo bhegi) yekucheka muchina, ultrasonic mucheka uye otomatiki bhegi system. Isu takaitirwa kukudziridza nekugadzira ese akanangana neFIBC michina, yakanyatsogadzirirwa uye kugadzirirwa yeFIBC inobatsira uye neshure yekupedzisa michina.
Nhasi, vatengi vazhinji pasi rese, vanogutsikana nehunhu uye kuvimbika kwedu masevhisi uye zvigadzirwa. Kubva pane yedu yakareba-ruzivo uye kuziva-sei, isu tinopa tekinoroji kune vatengi vedu kutanga kana kuwedzera yavo yekugadzira mitsara kuti itarisane nemusika zvinotarisirwa pamwe neyakaregedza netsika mapurojekiti.Our chinangwa ndechekuvandudza masevhisi edu uye chigadzirwa renji kusvika kugutsa vatengi vedu nekutevera matekinoroji matsva uye zvinodiwa pamusika.
Nesimba technical technical . Isu tinotora nzira nyowani yekutapurirana, iyo inogona kutema silinda jira uye rimwe chete jira jira. Haizoshandiswe nekuti jira rakanyorovera kana kunamira pabanga. Iyo inogona kudzikisa mutengo wekugadzira uye nekuvandudza yako kubatsirwa. Pahwaro hwekugadzira michina, isu tinokudziridza yedu yakateedzana epurasitiki yakarukwa zvigadzirwa.
Isu tinove vanokudzwa jumbo bhegi muchina mhinduro kambani ine yakazvimirira R&D chinzvimbo, mhando yepamusoro zvigadzirwa uye premium sevhisi. Tinogona kupa mhinduro yese yemarudzi ese eFIBC kugadzira. Tinogamuchira zvakavanzika zvakagadzirwa nemuchina masevhisi, ngatizvivandudzei nekudzidza, zvichasimudzirawo tekinoroji yedu zvakanyanya uye nekukura. "Sevhisi Mutengi, Gadzira Pamwe" ndiyo musimboti wakadzika midzi mumoyo mevanhu vese. Nekutungamira kwesimba, isu tinowana kuzikanwa kwakazara nevatengi vedu vekunze uye vekunze.
Isu tiri nyanzvi nezve Ultrasonic yekucheka muchina, jumbo bhegi kugadzira muchina uye zvichingodaro. Isu tinotengesa zvigadzirwa zvedu kune nyika dzinopfuura makumi mashanu nenzvimbo dzakadai seMiddle East, Russia, Southeast Asia ne Africa. Zvigadzirwa zvedu nemasevhisi anofarira mukurumbira wakanaka pasirese.Tiri kuwedzerawo vatengi vedu. Mune ramangwana, isu tichaisa kumusoro matavi kuno muVietnam neNigeria, tinogona kuita zvirinani uye zvirinani mune jumbo bhegi kugadzira muchina indasitiri.
Nesimba rinoenderana, isu tave nehunyanzvi hwepamusoro, michina yakanaka, hunyanzvi hwetekinoroji pamwe neyakaomarara mhando vimbiso sisitimu. Panguva imwecheteyo, isu tiri vanokudzwa jumbo bhegi muchina mhinduro kambani ine yakazvimirira R&D chinzvimbo, mhando yepamusoro zvigadzirwa uye premium sevhisi.
With kuramba kuvandudzika, tanga tichizvipira pachavo kuti michini indasitiri. Neruzivo rwedu rwekugadzirisa ruzivo tinoramba tichivandudza michina yedu kune yakakodzera indasitiri zuva nezuva. Chero chipi chitsva muchina chatinogadzira isu tinoedza michina mufekitori yedu yekugadzira, mushure mekugutsa bvunzo isu tinosuma kumusika.
Kuzvimirira kutsvagisa nekusimudzira kugona, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi emhando yepamusoro.
VYT muchina uri kupa masevhisi kune ayo vatengi, kune zvirinani kushambadzira mhinduro.
Yedu fekitori yakanyatso kudzora nhanho dzese dzekugadzira, zvirinani kudzora mhando uye nguva yekuendesa.
VYT chiratidzo chakakosha mudiwa kune vazhinji vagadziri, mainjiniya makontrakita uye vanopa michina.
"Wepamusoro mhando, mitengo inonzwisisika & inonzwisisika mushure mekutengesa sevhisi" ndiyo nheyo yedu, "Kugutsikana kweVatengi" ndicho chinangwa chedu chekusingaperi; zvigadzirwa zvedu zvakave zvakagamuchirwa kwete kwete chete mumusika musika asiwo mumisika zhinji yekukunze kutenderera pasirese.
Bhizinesi diki uye rine simba, vashandi vekambani vakazvipira kupa zvigadzirwa zvekutanga-zvemunharaunda kuwanda kweshamwari, basa rekutanga.Tinotenda VYT ichave iri nani uye iri nani, kudiwa kwevatengi ndiyo yedu isingagumi injini yekuvandudza, rutsigiro rwevatengi uye kusimbiswa ipeturu yedu kuve nani!